USA: Xasuuq ballaaran oo xalay ka dhacay Las Vegas “Music Festival” (Video) – Kasmo Newspaper
USA: Xasuuq ballaaran oo xalay ka dhacay Las Vegas “Music Festival” (Video)
Updated - October 2, 2017 1:06 pm GMT
London (Kasmo), In ka badan 50 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 400 oo kalena waa ku dhaawacantay, rasaas xalay, 22,30kii fiidnimo, xilliga USA, lagu garaacay goob uu ka socday Bandhig Faneed 3 maalmood ah, magaalada Las Vegas, Gobolka Nevada.
Bandhigga kooxda “Route 91 Harvest Country Music” waxaa goob joog ahaa dad lagu qiyasay 22,000, muuqaallada laga arkay Video-ga waxay muujinayaan tacshiirad darandoorri u dhacaysa iyo dadka oo dhulka dhabbacanaya.
Rasaastu waxay ka soo dhacaysay daaqad ku taalla dabaqa 32aad ee Hutel “Mandalay Bay Casino” oo ka mid ah huteellada ugu waaweyn dariiqa goobaha lagu ciyaaro Khamaarka (Casino), dalxiiskuna ku badanyahay.
Boliska ayaa sheegay in ay maydkiisa ugu tageen qolka 35aad ee dabaqa 32aad, ninka qur ah ee falka lagu tuhunsanyahay, haybtiisana lagu sheegay Stephen Paddock oo 64 jir ah (Sawirka sare), kaas oo la aaminsanyahay in uu is dilay, waxaana goobta loogu tagay hub fara badan.
Paddock oo Maraykanka cad ahaa waxaa la aaminsanyahay in uusan la lalahyn wax xiriir ah kooxo argagixiso, waxayna xiriir la sameeyeen haweeney ka soo jeedda Asia, laguna magacaabo Mary Lou Danley (Sawirka hoose), oo la sheegay in ay saaxiib la tahay ninkaas, haddana ku maqantahay dalka Filibbiin, laakiin wali ma cadda in dhacdada lagu xiriirinayo iyo in kale..
Qaraabada ninka falka gaystay, oo degganaa magaalada Mosquite oo 130 km u jirta Las Vegas, waxay sheegeen in uu ahaa shalkhsi caadi ah oo an lug ku lahayn arrimo siyaasadeed iyo diimeed, lagana fili karin fal noocaan oo kale ah.
Waa tiradii ugu badnayd oo geeri mar qura ah, ka dib middii Orlando oo bishii Juun 2016kii, goob lagu caweeyo, “Pulse Nightclub” ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 49 qofood.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Amniga Gudagha wuxuu sheegay in ayan jirin halis kale oo si gaar ah uga jirta meelo kale oo muhiim ah dalka, dhacdadaas ka dib.